आफ्नो प्रेमिका अथवा श्रीमतीको यस अङ्ग कहिले पनि नछुनुस् ! -
VoiceNp	प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८ समय: ९:५०:०७
एजेन्सी-वेद र शास्त्रमा महिलालाई लक्ष्मीको दर्जा दिइएको छ। यदि स्त्री नहुने हो भने मानव सभ्यता अहिले जहाँ सम्म आएको छ यहाँ सम्म आइपुग्ने नै थिएन शृष्टिलाई अगाडी बढाउने मात्र नभई मानव सभ्यतामा स्त्री वर्गको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ। हिन्दु धर्ममा त्यसै कारणले गर्दा स्त्री वर्गलाई पूजा गर्ने गरिन्छ।
एजेन्सी,वास्तुशास्त्रमा शयन कक्ष अर्थात् सुत्ने कोठाको निकै महत्व रहेको बताईएको छ । त्यसैले शयन कक्ष हरेक व्यक्त‌िको जीवनको एक मुख्य भाग हुने गर्दछ ।
शयन कक्षमा व्यक्त‌ि आफ्नो द‌िनभरको थकान मेटाउने गर्दछ र नयाँ उर्जा प्राप्त गर्ने गर्दछ । दाम्पत्य जीवनको प्रेम र सुखको मामलामा पनि शयन कक्षको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । त्यसैले शयन कक्षको मामलामा यस्तो ५ गल्तिहरु गर्नबाट बच्नुहोस् ।
१. धेरै जसो मानिसहरु आफ्नो शयन कक्षमा वोस बेस‌िन (voss basin) राख्ने गर्दछन् । वास्तुशास्‍त्रअनुसार यसले सम्बन्धमा व‌िश्वासको कमि गराउने र शंकालाई बढाउने गर्दछ ।
२. पाहुना र साथीहरुलाई अत‌िथ‌ि गृह (Drawing room) मा बसाउने गर्नुहोस् । आफ्नो बेडरूममा जसलाई पनि ल्याउनु हुदैन । वास्तु व‌िज्ञानको अनुसार यसले शयन कक्षमा नकारात्मक उर्जालाई बढाउने गर्दछ र सम्बन्धमा टाढापन ल्याउने काम गर्दछ ।
३. शयन कक्षमा दर्पण राख्नु हुदैन। यदि दर्पण राख्न निकै जरुरी रहेको छ भने यसरी राख्नुहोस् कि खाटबाट तपाइको अनुहार एनामा नदेखिओस । खाटको अगाडिको एनाले तपाइको भित्र नकारात्मक उर्जा बढाउने गर्दछ र तपाइको उत्साहलाई कमी गराउने गर्दछ ।
४. आजकल बक्स पलङ्गको प्रचलन निकै चलेको छ । यदि तपाई पनि यस्तो खाले बेडको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसमा फोहोर र बिजुलीको सामान नराख्नु होस् । यसले सम्बन्धमा टाढापन र सधै मन मुटाव हुने गर्दछ । खाटको मुनि जुत्ता,चप्पल पनि नराख्नु होस् ।
५. बेडरूममा गमला पनि राख्न हुदैन । यदि गमला राख्न चाहनुहुन्छ भने कृत्र‌िम फुल भएको गमला राख्नुहोस् ।